I-2F -Iphupho Elimibalabala -Ikhishi Elinezinto Ezintsha Kakhulu
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sugar
-Ifulethi lethu liseduze nendawo engasechibini (indawo yezivakashi, amatekisi nezithuthuthu zingafika ngqo, asikho isidingo sokukhuphuka intaba) futhi kude nokuphithizela kwamabha nemigwaqo.
-3-6 imizuzu ngokususelwe ekutheni uhamba ngokushesha kangakanani ukuya ogwini lwechibi. Kunezitolo eziningi ezincane ezithengisa imifino nenyama ephilayo emnyango. Ukuya esitolo esikhulu kunazo zonke endaweni eseceleni kwechibi kudinga imizuzu eyi-6-8.
1, Indawo enhle: Indlu iqhele ngemizuzu emi-3-5 ukusuka endaweni eseceleni kwechibi. Amatekisi nezithuthuthu zingafinyelelwa ngqo, futhi asikho isidingo sokukhuphuka intaba.
2, Ukulala okunethezeka: Wonke amashidi ombhede asuka ku-100% wekhwalithi ephezulu kakotini, ukuminyana okuphezulu nokunethezeka. Omatilasi bathambile futhi banegwebu.
I-3, Ikhishi Elihlonyiswe Ngokugcwele: I-Nepal iyizwe lezolimo elingathuthukisiwe elingasebenzisi izibulala-zinambuzane kanye nomanyolo lapho kulinywa imifino. Ngakho-ke, izitolo ezincane ezisemnyango zithengisa izithako eziphilayo ezinempilo futhi zinambitha okumnandi kakhulu. Ikhishi lilungiselele izinongo eziyisisekelo, irayisi, ubhontshisi, namafutha kabhekilanga (kokubili okuphilayo) nezinye izakhi zokupheka kwakho. Kodwa irayisi liqinile, kodwa lokhu kuyi-organic.
I-4, Amanzi Aphephile: Amanzi aseNepalese awakwazi ukudliwa ngokuqondile, sinikeza amanzi okuphuza nezifudumezi zamanzi.
4.90(21 okushiwo abanye)
- Imizuzu emi-3 uhamba ngezinyawo ukuya endaweni yaseLakeside (kusukela emhumeni wethu, iLakeside Lounge Fishtail Lounge edume kakhulu kanye neNational Park - umoya omusha, ihlathi, izindawo eziluhlaza kanye ne-Fewa Lake). Yingakho kwakhiwa izindawo eziningi zokungcebeleka nezipa ukuzungeza le ndawo esikhundleni samahhotela avamile.
- Kunamakhefi amaningi nezindawo zokudlela ezinhle endaweni eseceleni kwechibi.
- Kukhona izitolo eziningi ezincane emnyango, ungakwazi ukuthenga imifino organic fresh.
Ukuze uqinisekise ubumfihlo bakho, ngeke ngivele endlini, kodwa uma kukhona usizo, ungangithinta nganoma yisiphi isikhathi, ngingeza ngokushesha.
USugar Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Pokhara namaphethelo